Duuliye Axmed Dheere oo eedeyn culus ujeediyay Madaxweyne Farmaajo | Allbalcad Online
Home WARARKA Duuliye Axmed Dheere oo eedeyn culus ujeediyay Madaxweyne Farmaajo
Duuliye Axmed Dheere oo eedeyn culus ujeediyay Madaxweyne Farmaajo
Duuliye Axmed Dheere ayaa si weyn ugu dhaliilay madaxweyne Farmaajo inuusan ka damqan shacabka Soomaaliyeed ee argagixisada ku layso qaraxyada, isla markaana uu garab istaag u muujin ehelada dadkaasi.
Waxa uu sheegay in nasiib darro weyn ay tahay in dowladda Soomaaliya oo uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo aysan marnaba ka fal-celin dhibaatada lagu hayo shacabka, taasi oo loo baahan yahay in laga gudbo, sida uu hadalka u dhigay.
“Waa nasiib darro dowladdii looga baahna inay dadaal badan sameyso, oo aysan xaqiiqdii waxba sameyn, iyada oo xataa aan madaxda dowladda laga hayn tacsi” ayuu yiri Duuliye Axmed.
Waxa kale oo kamid ahaa dadkii ku naf waayay qaraxaasi ismiidaminta ahaa qof ka tirsan dowladda Soomaaliya, gaar ahaa waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha oo uu u qaabilsanaa safaaradda Soomaaliya ee Ethiopia, sida ay ogaatay Caasimada Online.
Previous articleAttorney charged with plot to steal Somali government funds
Next articleXildhibaan Cali Balcad oo Kaqeybgalay Kulan Aqoon isweydaarsi Ah oo Lagu qabtay Jaamacada Banaadir